काठमाडौं , नेपालमा पछिल्लो २४ घन्टामा कोरोनालाई जितेर थप ९० जना घर फर्किएका छन ।स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रबक्ता प्र.डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार पछिल्लो पटक ९० जना निको भएर घर फर्किएका हुन् ।
यो सहित निको भएर घर फर्किनेको संख्या ६७४ पुगेको छ। त्यस्तै प्रबक्ता गौतमका अनुसार नेपालमा आज थप २७९ जनालाई कोरोना पुष्टि भएको छ । यो संगै संक्रमितको संख्या ४३६४ पुगेको छ । स्वास्थ्यमन्त्रालयका प्रबक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार देशका बिभन्न प्रयोगशालामा गरिएको परिक्षणमा थप २७९ जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार आज प्रादेशिक प्रयोगशाला बिराटनगरमा मोरङका ८ जना पुरुष संक्रमित भेटिएका छन्। एकजना झापाकी महिलामा पनि संक्रमण भएको छ। कोशी अस्पतालमा झापाका ४ जना पुरुष संक्रमित भेटिएका छन्।
त्यहीँ उदयपुरका एकजना पुरुषमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा सप्तरीका ६ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। जसमा महिला १ रहेकी छन्। भरतपुर अस्पताल प्रयोगशालामा चिवतका दुईजना संक्रमित भेटिएका छन्। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखारा नवलपुरका १ पुरुषमा संक्रमण भेटिएको छ।